कसले दिएन केपी ओलीलाई काम गर्न ? « Lokpath
२०७७, १९ पुष आईतवार ०६:५०
कसले दिएन केपी ओलीलाई काम गर्न ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १९ पुष आईतवार ०६:५०
यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले कहाँकहाँबाट अवरोध बेहोरे ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले केही टिप्पणी गर्न चाहेनन्। जनता समाजवादी पार्टीका डा सुरेन्द्र झाले प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सेवा दिन खोज्दा प्रतिपक्षी दलले कहिले अवरोध नगरेको स्पष्ट पारे। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।